Kulan lagu qabtey Garowe
21 Nov 21, 2012 - 5:00:30 AM
Xarunta Wasaarada Amniga Puntland ayaa maanta 21 November,2012 lagu qabtey shir lagu soo bandhigey wacyigelino ku saabsan Nabada iyo Amaanka kaasi oo lagu baraarujinayo dhalinyarada ka soo baxda Al-shabaab iyo Burcad badeeda.
Wasiirka Amniga Puntland Col.Khaliif Ciise Mudan ,Wasiirka Cadaalada Dr.Cabdi Khaliif Xaaji Xasan Ajaayo ,Taliyaha Booliska Gen.Maxamed Siciid Jaqanaf ayaa ka soo qaybgalay bilowgii kulankan.
Barnaamijkan ayaa waxa wasaaradaha Amniga iyo Cadaalada gacan ka siinaysa hayada UNDP ,waxana mashruuca hayadu ku bixisaa dhaqaale lacageed iyo mid agab.
Wasiirka Amniga Puntland Col.Khaliif Ciise Mudan ayaa furitaankii shirka ka sheegay inuu yahay baraamijkaan wacyigalinta dhalinyarada mid aad u wanaagsan,uuna rajeynayo inuu hirgalo.
Wasiirku waxa sheegey barnaamijkab mid lagu badalayo dhaqanka dhalinyarada ka soo goosa Al-shabaab iyo kuwa kale uu ku jira falalka lidiga ku ah amaanka iyo xasiloonida.
Wasiirka Cadaalada ,Arrimaha Diinta iyo Dhaqan-celinta Puntland Dr.Cabdi Khaliif Xaaji Xasan Ajaayo ayaa uga mahadceliyay hayada UNDP
ay ka wado Puntland ,isagoona u tilmaamey inay wax ka qabtaan kor u qaadida tayada garsoorka.
Taliyaha Booliska Puntland Gen.Maxamed Siciid Jaqanaf oo gabagabadii ka hadlay madasha ayaa waxa uu sheegay inay jireen dhalinyaro badan oo markii hore faraha kula jiray falal amni xumo ah balse hada ay ka waantoobeen ka dib markii
loo qabtey wacyiglin ku saabsan nabada iyo amaanka.
Barnaamijkan ayaa qayb ka ah dadaalada Puntland ugu jirto sidii loo hagaajin lahaa dhaqanka dhalinyarada la duufsadey ama xooga lagu geliyey kooxaha amaanka gasa,waxana hubaal ah markii uu u dhamaado in bulshada iyaga oo toosan dib ugu soo laaban doonaan.
Halkan ka dhagayso warbixin uu ka diyaarshay shirka Cawil Cali Jaamac